सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुराइ बानी होइन, रोग हो | ''Knowledge Never Ends''
सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुराइ बानी होइन, रोग हो
सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुर्दाघुर्दै सास रोकिनाले आत्तिएर ब्युँझने गर्नुभएको छ ? राति बारम्बार निद्रा खलबलिन्छ ? निद्रामा बर्बराउनुहुन्छ ? उत्तर सकारात्मक छ भने एकपटक चिकित्सक कहाँ गइहाल्नुस् । बढी घुर्नु आफैंमा एउटा रोग हो । ‘घुर्दा सास बन्द समेत हुन्छ, तर सास दस सेकेन्डभन्दा बढी रोकिनु असामान्य हो,’ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एन्ड स्लिप मेडिसिन कन्सलटेन्ट डा. रमेश चोखानी भन्छन्, ‘एक घन्टामा पाँचपटकभन्दा बढी समयसम्म सास रोकिने समस्या छ भने चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार घुर्दा सास रोकिने समस्या देखिएकाहरूलाई मुटुको रोग, पक्षाघातको सम्भावना धेरै हुन्छ ।
← कम्प्युटरमा डाटा हराउनबाट बच्न समयमै होस् पुर्याउनुहोस् यसरी (use Crystal Disk Info)
Hard Reset your Samsung Galaxy Note2→